Chad Schwitters waxay ku biirtay McKnight Janaayo 2022 asaga oo ah sarkaal sare oo barnaamij ah oo wata barnaamijka Bulshooyinka Firfircoon iyo Sinnaanta. Doorkan, wuxuu kormeeraa oo uu horumariyaa faylalka deeqaha waxbarasho ee cusub si loo dhiso mustaqbal firfircoon oo loo siman yahay dhammaan dadka reer Minnesota ee leh awood la wadaago, barwaaqada, iyo ka qaybgalka.
Schwitters waxay McKnight u keentaa faham qoto dheer oo ku saabsan guriyeynta, maaliyadda, iyo dhaqaalaha. Muddo 20 sano ah waxa uu ahaa Maamulaha Guud ee Urban Homeworks, Inc., oo ah hay'ad diiradda saarta horumarinta bulshada hal-abuurka leh iyada oo loo marayo guriyeynta. Sannadkii 2008dii, waxa uu aasaasay oo hoggaamiyay Iskaashatada Grisel, oo ah iskaashato aasaasi ah oo diiradda saaraysa beddelka shidaalka-fosaalka. Dhowaanahan, waxa uu ku shaqayn jiray la-talin isaga oo u maraaya shirkadiisa Visify, isaga oo ka caawinaya hogaamiyayaasha in ay ku koraan xog-ururinta, tababarka, iyo horumarinta ururrada iyo dhaqamada dhexdooda.
Schwitters waxay ka qalin jabisay shahaadada koowaad ee jaamacadda ee dhaqaalaha Jaamacadda Beytel. Waa xubin hore oo guddi ka ah Shirkadda Masraxa Kacdoonka ee Northside Achievement Zone iyo Kacdoonka, horayna wuxuu u soo noqday xubin guddiga iyo gudoomiyaha Isku xirka Metro ee Horumarinta Bulshada. Muddo dhowr sano ah, wuxuu si mutadawacnimo ah ula shaqeeyay Kooxda Waxqabadka Bulshada ee Northside, isaga oo door istiraatijiyadeed ka qaadanaya dadaalladooda gurmadka duufaannada.
Schwitters waa Minneapolis Northsider muddo dheer, halkaas oo uu hadda la nool yahay xaaskiisa, saddex carruur ah, iyo Jack Russell Terrier. Waxa uu ku qaatay xagaagiisii Greater Minnesota beer qoys oo wali waxa uu jecel yahay in uu ka baxo magaalada oo uu kaxeeyo, quuso, ski, iyo socod lugeeyo.